Ilungele umndeni nebhizinisi iVW Caddy entsha
Fanelesibonge Bengu | April 11, 2022
IMOTO: VW CADDY
I-VOLKSWAGEN eNingizimu Afrika yayinethemba lokuthi izokwethula iCaddy entsha ngaphambi kokuphela konyaka odlule.
Lokhu kugcine kungenzekanga ngenxa yezingqinamba eziningi ezahlukene nokuyinto ethinta nezinye izinkampani.
ICaddy, okungeyezisukulwane sesihlanu, isigcine yethuliwe nokho. Le moto akuyona kuphela eyemindeni kepha nosomabhizinisi bayayithanda ekuthutheni impahla.
Ifika yehlukene ngezinhlobo okuyiCaddy, Caddy Kombi neCaddy Cargo. Le moto ilayisha abagibeli abahlanu okanye abayisikhombisa kwazise uyakwazi ukuthola eluliwe ubude. Yimoto yawo wonke umuntu kusuka emindenini kuya kosomabhizinisi. Ngike ngiyibone isetshenziswa nangamaphoyisa kodwa kwelayisha abayisikhombisa isikhala sempahla asibonwa. Kulula nokho ukukhipha nokubuyisela izihlalo zangemuva.
Kunezinjini ezimbili okukhethwa kuzo: ekaphethroli engu-1.6 litre nekadizili ene-turbo engu-2.0 litre.
Zombili zinamandla angu-81kW no-gearbox oyi-6 speed manual. Umehluko yi-torque nendlela ezidla ngayo njengoba ekaphethroli ino-152Nm futhi idla amalitha angu-7.3 ngo-100km, kuthi ekadizili ibe no-300Nm futhi idla 5.5 ngo-100km. U-gearbox ozishintshayo uzotheleka ngokuhamba kwesikhathi.
Yize ingenayo i-turbo kodwa injini kaphethroli inamandla ayingabazisi.
Ihamba samoto encane nokusizwa wukuthi yakhelwe phezu kwesisekelo esibizwa ngeModular Transverse Matrix (MQB) platform esisebenza nakwiGold 8. Siphinde sisize nasekusetheni yengezwe ubuchwepheshe obuningi.
ICaddy inamalambu eLED, ama-roof rails, futhi uma uthanda ufaka i-sunroof namarimu angu-16 inch.
KwiCaddy Kombi khona amalambu eLED uwengeza uma uthanda namarimu angu-16 inch, ikhamera eveza ingemuva, cruise control ne-towbar.
ICaddy Cargo inama-dayitime running lights, amalambu akuwona amaLED, inezicabha zangemuva ezivuleka zombili nokunye.
Zonke lezi zimoto zinkulu futhi zivulekile kunezindala.
Ikwazi ukuxhuma iselula nge-Apple CarPlay/Android Auto, iyakusiza ukupaka, nokunye.
•Caddy 1.6i 81kW Manual - R484 200
•Caddy 2.0 TDI 81kW Manual - R573 800
•Caddy Maxi 2.0 TDI 81kW Manual - R600 400
•Caddy Kombi 1.6i 81kW Manual - R412 100
•Caddy Kombi 2.0 TDI 81kW Manual - R476 100
•Caddy Maxi Kombi 2.0 TDI 81kW Manual - R502 700
•Caddy Cargo 1.6i 81kW Manual - R404 000
•Caddy Cargo 2.0 TDI 81kW Manual - R460 600
•Caddy Maxi Cargo 2.0 TDI 81kW Manual - R487 200
ICaddy neCaddy Maxi zine-warranty yeminyaka emithathu noma u-120 000km bese kuthi ezinye zibe neyeminyaka emibili engakaliwe ibanga.